Uluhlu lweefowuni zika-Asus eziya kuhlaziya kwi-Android Pie kwi2019 | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, Iinguqulelo ze-Android
Inxalenye enkulu yeempawu kwintengiso zisebenza kwi-Android Pie kwiifowuni zazo. Kukwimeko ka-Asus. Inkampani iqinisekisile kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo uluhlu olupheleleyo lwee-smartphones kwikhathalogu yayo eya kuba nokufikelela kwi-Android Pie kulo nyaka. Ke abasebenzisi abanefowuni yophawu banokwazi ukuba ifowuni yabo iyakwazi ukufikelela kuyo.
Ngelo xesha Ngaba ziifowuni zika-Asus eziza kuba nokufikelela kwi-Android Pie kwi-2019. Nangona oku kuthetha ukuba kunokubakho iimodeli ezithile eziya kuba nolu hlaziyo, kodwa kufuneka zilinde ithutyana ixesha elide zide zifumane.
Iindaba eziza emva komhla wokubhengezwa kweflegi entsha yenkampani ziye zavuza, eya kufika entwasahlobo. Ngokukhawuleza emva koko waqala ukufika kwiZenfone 5Z yohlobo, efumana ngokusemthethweni uhlaziyo. Kukho ke ezinye iimodeli zika-Asus ebefumana i-Android Pie kangangenyanga.
Kwabaninzi kunokubonakala ngathi olu luhlu lweemodeli lucothisile. Nangona kulungile ukubona ukuba ubuncinci inkampani inika ukucaca kubasebenzisi. Ke bayazi ukuba baya kuba nakho ukufikelela kwi-Android Pie kulo nyaka kwifowuni yabo. UAsus sele eqinisekisile uluhlu lweemodeli, ezi:
I-Zenfone4 ​​Max kunye ne-4 Selfie
Zenfone Phila kwaye Live L1
UAsus Zenfone M1 Max, uMax Plus kunye noMax Pro
I-Zenfone 5: Asus Zenfone 5, 5Z kunye 5Q
Asus ROG Ifowuni
I-Zenfone Max M2 kunye neM2 Pro
Ke ngoko, ukuba unayo nayiphi na le modeli yohlobo, Ungalindela ukuba iPie ye-Android ifike kulo nyaka ngokufanayo. Iindaba ezimbi kukuba inkampani ayisinikanga mihla yokufika ngokufanayo kwezi modeli. Ke kule ngqiqo kuya kufuneka silinde ithutyana.
Kodwa ubuncinci kubasebenzisi yinto ebonelela ngolwazi, kunye noxolo lwengqondo kwezinye iimeko. Kuba uninzi lwalungazi nokuba lungalinda uhlaziyo olunje. Ekugqibeleni iyinto esemthethweni ngoku, ityhilwe yinkampani uqobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » UAsus uqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni eziza kuhlaziya kwi-Android Pie
Imiyalezo kaGoogle idibanisa iimpendulo ezilungileyo kwiSpanish